Tsy ofisialy ny valim-pifidianana taorian'ny nifidianan'ny Vahoakan'i Zambia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy ofisialy ny valim-pifidianana taorian'ny nifidianan'ny Vahoakan'i Zambia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Zambia
Fifidianana any Zambia
Nifidy i Zambia: Araka ny valiny tsy voamarina dia eo amin'ny toeran'ny fandatsaham-bato Andriamatoa Hichilema amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny 64.9% -n'ny vato, arahin'ny filoha Edgar Lungu tamin'ny 33.1%. Ny kandidà Demokratika Harry Kalaba (0.4%) sy Fred M'membe avy amin'ny antoko sosialista (0.3%) no manara-dia azy ireo.
Ny filoham-pirenena Zambiana amin'izao fotoana izao Edgar Lungu dia mitady ny hisafidianana azy indray.
Ny mpifanandrina aminy dia i Hakainde Hichilema, mpanatanteraka orinasa malaza any Zambia.
Ireo sehatra fifandraisana, toa ny SKYPE na WhatsApp, Facebook na Twitter dia mikatona any amin'ny faritr'i Zambia amin'izao fotoana izao, na izany aza ny faritra sasany dia toa an-tserasera indray araka ny filazan'i eTurboNews statistikan'ny fifamoivoizana anaty Internet.
Ny fanisana tsy ofisialy voalohany dia tonga avy amin'ny faritra maro, na izany aza, misy feo misy valiny ara-drariny sy tsy ara-drariny nalefa tany amin'ny resaka media sosialy ao Zambia.
Mandeha ny fanisam-bato farany amin'ny biraom-pifidianana samihafa manerana ny firenena. “Arosoy tsara ny loharanom-baovaonao rehefa mizara fampahalalana momba ny fifidianana momba ny fifidianana tamin'ny 2021 mba hialana amin'ny fanaparitahana vaovao diso sy diso.” dia lahatsoratry ny Vondrona Fanaraha-maso ny Fiangonana Kristiana.
Ny fifidianana afrikanina dia manapa-kevitra any amin'ny faritra ambanivohitra ary miady amin'ny tanàna. Ity ny fanehoan-kevitr'i Dr. Walter Mzembi, minisitry ny fizahantany teo aloha tany Zimbabwe ary mpikambana mpanatanteraka ao amin'ny Birao fizahantany afrikanina. Miantso ny teniny izy: lozisialy fifidianana Mzembi!
Omaly alina dia nisioka izy hoe: - marina ve ny henoko? Sa ny sofiko mihombo? Mahagaga tokoa!
Ny ankamaroan'ny fanisana tsy ofisialy dia maminavina ny fanovana governemanta any Zambia amin'izao fotoana izao.
Ny filoham-pirenena Zambia dia voafidy tamin'ny alàlan'ny rafitra roa. Amin'ireo mpikambana 167 ao amin'ny Antenimieram-pirenena dia 156 no voafidin'ny rafitra voalohany-a-paositra any amin'ny faritra voafidy ho an'ny mpikambana tokana. Valo hafa no tendren'ny filoham-pirenena ary telo hafa ho mpikambana ofisialy: ny filoha lefitra, ny kabary, ary ny lefitra mpisolo toerana iray voafidy avy ivelan'ny Antenimieram-pirenena. Ny lefitra mpisolo toerana faharoa dia voafidy amin'ireo mpikambana voafidy ao amin'ny trano.
Ny vanim-potoanan'ny fifidianana ao Zambia dia 18, raha ny kandidan'ny Antenimieram-pirenena dia 21 taona farafahakeliny.
Tamin'ny 28 Jolay, ny sekretera jeneralin'ny UPND Batuke Imenda dia namoaka fanambarana fa diso fanantenana ilay antoko tamin'ny andrim-panjakana nampiasain'ny filoha Lungu hanakanana ny kandidà ho filoham-pirenena UPND Hakainde Hichilema tsy hanao fampielezan-kevitra.
Tamin'ny 30 Jolay dia nosakanana tsy hiditra tao Chipata i Hichilema sy ny ekipan'ny fampielezan-keviny ary notazonina amina lalamby ny seranam-piaramanidina Chipata. Talohan'ny nahatongavan'i Hichilema tao Chipata dia efa namono ny mpanohana azy ny polisy. Ny 3 aogositra ny polisy tao Mbala dia nanakana an'i Hichilema sy ny ekipan'ny fampielezan-keviny tsy hiditra ao an-tanàna, miaraka amin'ny filazan'ny polisy fa mila fahazoan-dàlana hiditra izy.
Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana i Ziva, izay miaro sy mampiroborobo ny zon'ny fitakian'ny mpifidy avy any Zambia hanakanana ny Internet ary miteny hoe: “Ny fizotry ny fifidianana dia an'ny mpifidy / mpifidy. #Esory ny Internet Fa maninona no sakanana ny internet? Ny tsy fahampian'ny mangarahara dia manimba ity valim-pifidianana ity.
Matetika ny isan'ny mpifidy ambony dia tsy marika tsara ho an'ireo miasa, ary avo ny isan'ny mpifidy raha ny tatitra voaray avy any an-toerana.
Tena reharehako ny momba ny zambiana satria nampiseho isika
Andalana mpifidy ao Zambia omaly
Ny toe-tsaina ao Zambia dia matanjaka tsy misy ohatr'izany manohitra ny fikasana hanimba ny fifidianana. Ity fiara ity dia hita nitondra vatom-pifidianana voalaza fa fanaovana hosoka. Nandao ny filaharany ireo mpifidy mba hiatrehana ny raharaha amin'ny fomba tsy mila fanazavana.
Ny fihetseham-po ao Zambia dia matanjaka tsy misy fampandrenesana manoloana ny fikasana hanimba ny fifidianana.
Ity fiara ity dia hita nitondra vatom-pifidianana voalaza fa fanaovana hosoka.
Navelan'ny mpifidy ny filaharany hiatrika izany amin'ny fomba tsy mila famaritana!
Miova ny fanovana ireo zambianina pic.twitter.com/g6ZiZwH7ei
- Hopewell Chin'ono (@daddyhope) Aogositra 12, 2021
Hafatra iray avy any Zambia milaza hoe:
Salama Zambia! Ny data miditra dia tena miabo ary mazava ny sitra-pon'ny vahoaka. Nefa mitandrema - rehefa mikorontana ny fitondrana mivoaka, dia mety handray fepetra henjana izy io. Milamina sy mifantoka foana amin'izay. Hiaro ny vatontsika amin'ny fiadanam-po sy fitiavana ao am-ponay izahay. ETO NY fanovana.
Nisy hafatra maika avy any Zambia nilaza fa miantso ny ZICTA izahay mba hakatona ny Internet avy hatrany mba hahafahan'ny olom-pirenena manaraka ny fizotry ny fifidianana ary hanohy amin'ny fiainany tsy voasakantsakana. Mahamenatra fa na ny PF izay nandidy ny fanidiana azy aza dia namoaka fanambarana tsy voafehy tamin'ny alàlan'ny VPN.
Nisaona ny hirany i Zambia teo aloha Filoha mpanorina Kenneth Kaunda: Fandriampahalemana, fizahan-tany, fiovan'ny toetrandro no hirany.
Misimisy kokoa momba ny fifidianana Zambia kitiho eto.
Manao veloma ny COVID-19 i Hawaii
Daty vaovao ho an'ny ITB Berlin: 9-13 martsa mivantana sy mivantana
Laharam-pahamehana vaovao amin’ny fikarakarana ny tany: tsy fahampian’ny mpiasa...